Nify / Grills volamena - Popular Jewelry
Ny grill iconic dia nipoitra tamin'ny taona 1980 nandritra ny taona vao nitombo ny hip-hip. Ny endriny tsotra kokoa taloha dia nivoatra be pitsiny satria nanatsara ny fomba fanaony ny indostrian'ny firavaka. Nandritra ny 30 taona, Popular Jewelry izy no lohalaharana tamin'ny famolavolana firavaka manokana; ny grills dia tsy nisy naningana. Manomboka amin'ny satroka tokana ka hatrany am-bavan'ny volamena sy diamondra— Popular Jewelry nanao azy rehetra.
Ny Famatsiam-bola mahazatra antsika - teny avy aminay.
Ho fampitandremana: tsy ireo karazana grills malemy, mahazatra, mitovy habe amin'ny karazana grills rehetra ireo - namboarina mba hanafatra; namboarina manokana ho an'ny mpitafy. Ho tafiditra izy ireo ihany ny mpanjifa natao ho azy ireo. Efa nahita fizarana fampisehoana heloka be vava izay andramany hampifanaraka ny mombamomba ny vatana amin'ny vatana amin'ny rakitsoratry ny olona very? Hay, izany dia fomba fisedrana sy marina; ny mombamomba ny nifin'ny olona iray dia miavaka toa ny ADN-ny. Amin'ny anaran'ny fieboeboana sy kalitao dia ataontsika matevina sy mateza kokoa ny fanaovanay ny fanavakavahana azy ireo amin'ireo an'ny fifaninanana. Raha mampindrana ilay tsikitsiky mamirapiratra amin'ireo namanao borikinao ianao, dia azo inoana fa hiafara amin'ny fahakiviana ratsy izy ireo- avy amin'ilay faktiora nify izay namboarin'izy ireo ny nify notetehin-dry zareo mba hanerena ny sakafonao. Tahaka ny firavaka namboarina manokana namboarina, ny fanaingoana manokana dia natao tamin'ny sain'ny avo indrindra amin'ny antsipiriany sy ny asa tanana. Ny grills dia manomboka amin'ny $ 150 (kapila volafotsy tokana) ary miakatra avy eo. Ataovy tsara ny nifinao. Eto. Tsy misy mpampivelona. Natao tamim-pireharehana tany New York.
Fampahalalana sy zavatra ilaina hodinihina rehefa mametraka ny kaontinao aminay.
1) Zary ambony na ambany? (Tops / Bottoms)
2) firy sy nify inona? (Incisors, Canines, Molars)
3) Iza amin'ireo metaly sarobidy? (Volafotsy Sterling, volamena (10K, 14K, 18K), Platinum)
4) Karazana karazana inona? (Rose, Fotsy, mavo)
5) Karazana vita inona? (Polished, Matte, sns).
6) Hevitra voafaritra? (Feno / misokatra tarehy / lainga / sns.)
7) Te hametraka vatosoa aminy ve ianao?
Karazana sy loko inona?
8) Raha azonao atao dia, andefaso sary / sary / sary / sary mba hanampiana anay hahatakatra ny karazana endrika tianao.
9) Mikasa ny hanao asa nify vory nify ve ianao atsy ho atsy (mety hisy fiantraikany amin'ny fomba mifanaraka aminy izany aoriana kely). Manoro hevitra ny fomba tokony handrosoana / maharitra amin'ny alàlan'ny mpitsabo nify alohan'ny fametrahana ny baiko grill miaraka aminay hiantohana ny fotoana maharitra ny grillz anao.
Rano vita amin'ny laser vita amin'ny laser nify valo
Varavarankely misokatra iray Cap
Toeram-pisakafoanana ho an'ny nify enina feno (volamena mavo / volamena fotsy)
Fambolena lemaka matevina feno
Banga lehibe misy ranomandry w / Frames (diamondra fotsy; fametahana vato Pavé)
Kely any ivelany (diamondra fotsy; Pavé Stonesetting)
Fanatanjahantena mahazatra (tarehimarika Kanji ho an'ny "Demon")
Fanamboarana mahazatra (ravina cannabis)
Fitaovana manokana (Playboy Bunny)
Famolavolana diamondra (Custom)
Vovoka diamondra / Volovola misokatra
Feno rano tanteraka (fikorotanana prong; volamena mavokely sy safira mavokely)
Hovitra diamondra (roa tonta)
Fangs vita amin'ny Classic
Drip (andalana ambany)
Hovitra diamondra (volafotsy)
Iced-Out Bar (fantsom-bato amin'ny fantsona;